मकर राशिमा पन्चग्रही महासंयोग, फागुन १६ गतेसम्म यी ३ राशिलाई हुनेछ महालाभ – List Khabar
Home / रोचक / मकर राशिमा पन्चग्रही महासंयोग, फागुन १६ गतेसम्म यी ३ राशिलाई हुनेछ महालाभ
मकर राशिमा पन्चग्रही महासंयोग, फागुन १६ गतेसम्म यी ३ राशिलाई हुनेछ महालाभ
काठमाडौँ : वैदिक ज्योतिष शास्त्रमा ग्रहहरुको राशि परिवर्तन या ग्रहहरुको संयोगको विशेष महत्व छ। हिन्दु पञ्चाङ्ग अनुसार फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यमा मकर राशिमा त्रिग्रही, चतुर्ग्रही र पञ्चग्रही योग बन्नेछ। ग्रहहरुको यो शुभ घटना विरलै देख्न पाइन्छ। ग्रहहरुको मिलनले केही राशिमा शुभ प्रभाव पार्नेछ।
कुन-कुन ग्रहको संयोगले पञ्चग्रही योग बन्छ त ?
फेब्रुअरी २०२२ मा पाँच ग्रह मकर राशिमा विराजमान रहनेछ। महिनाको सुरुवातमा सूर्य मकर राशिमा विराजमान छ तर १३ फेब्रुअरी(फाल्गुन १ गते)मा सूर्य कुम्भ राशिमा गोचर गर्नेछ। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र र मंगल ग्रहले पञ्चग्रही योग बनाउनेछ। १० मार्च(फागुन २६)सम्म शुक्र, मङ्गल र शनि मकर राशिमै रहनेछ। यसबाहेक बुध र बृहस्पति कुम्भ राशिमा बस्नेछन्।
यी राशि हुनेलाई फाइदा : –
तपाईको राशिको दशौँ भाव यानी करियर भावमा पञ्चग्रही योग निर्माण हुँदैछ। यस समयावधिमा तपाईलाई धन लाभ हुनेछ। जागिरमा प्रगति मिल्नेछ। तपाईको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ।
पञ्चग्रही योगको निर्माण तपाईको राशिको नवौँ यानी भाग्य भावमा हुँदैछ। यसकारण यस अवधिमा तपाईलाई भाग्यले पूर्ण साथ दिनेछ। जुन काममा हात हाल्नुहुनेछ, त्यो कामले पूर्णता पाउनेछ। व्यापारीहरूले नाफा कमाउनेछन्।
मीन राशिका लागि पञ्चग्रही योग शुभ साबित हुनेछ। यो योग तपाईको राशिको एघारौँ भाव यानी आय भावमा बन्दैछ। यस अवधिमा तपाईलाई अचानक धन लाभ हुन् सक्छ। व्यापारमा नयाँ सम्झौता हुन् सक्छ। व्यापार विस्तार हुन सक्छ।
Previous काखीमा पसिना आएका कारण लज्जित हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा
Next पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘आई लभ यु बुढी’ भन्दै कार्यक्रममा गरेको चुम्बन टिकटकमा भाइरल (भिडियो)